အီးကောမတ်စ်တွင်အသုံးပြုရန်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်လိုအပ်သည့်အချက်များ Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 22, 2017 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 22, 2017 Douglas Karr
သင်၏ eCommerce ရလဒ်တိုးတက်စေရန်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုချဲ့ထွင်ရန်၊ တိုင်းတာရန်နှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက်အသုံးပြုသူတိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုသည်အရေးကြီးသည်။ သင်တိုင်းတာခြင်းမပြုသည်ကိုတိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်ပါ ပိုဆိုးတာကသင်တိုင်းတာတာကိုကန့်သတ်လိုက်ရင်အွန်လိုင်းရောင်းအားကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ပါတယ်။
As Softcrylicရောင်းချသူ - ကြားနေသည့် Data & Analytics ကစားသမားကဖော်ပြသည်မှာ tag စီမံခန့်ခွဲမှုသည် Digital Marketers များကို Mark ည့်သည်များခြေရာခံခြင်း၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပစ်မှတ်ခြင်း၊
Tagging သည် scripts များထည့်ခြင်းသာမကသင်၏ site နှင့်ဆက်စပ်သော data များကိုပါသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ Analytics ပလက်ဖောင်းများသည်အခြေခံတပ်ဆင်မှုနှင့်အတူများစွာသော tags များကိုဖမ်းယူသည်။ သင်၏ e-commerce ပလက်ဖောင်းတွင်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါက ပို၍ အရေးကြီးသော tags များစွာကိုလွဲချော်သွားသည်။
Softcrylic မှဤအချက်အလက်သည်သင်၌ထည့်သွင်းသင့်သည့် tags များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် ကုန်သွယ်ရေးစာမျက်နှာ၊ ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာ၊ လှည်းစာမျက်နှာ၊ ငွေစာရင်းစာမျက်နှာနှင့်အတည်ပြုစာမျက်နှာ.
Tag စီမံခန့်ခွဲမှုစာရင်းစစ် - Tag Auditing ဆိုသည်မှာကျိုးပျက်နေသော tags များကိုထိထိရောက်ရောက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်၊ ပစ်ခတ်မှုအပြုအမူ၊ ကြိမ်နှုန်း၊ အချက်အလက်တိကျမှုနှင့်ဒေတာယိုစိမ့်မှုတို့အတွက်အချိန်မီ၊ စနစ်တကျအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် tags များ၏အလိုအလျောက်အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖြစ်သည်။
ဒေတာအလွှာ - Driven Tag ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု - ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားသည့်“ Data Layer” ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် Tag Management Systems အားပလက်ဖောင်းများနှင့်ထုံးစံအတိုင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းဖြင့်အချက်အလက်များဖလှယ်ခြင်းဖြင့်အဆုံးစွန်သောထိန်းချုပ်မှု၊
Piggybacking Tags ကိုဟန်ချက်ညီ - Piggybacking နှစ်ဖက်သန်သောဓားကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ retargeting အတွက်ကူညီပေးသည်။ သို့သော်ကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ခြင်းမရှိပါက page loading time ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပြီး data security ကိုထိခိုက်စေပြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဂုဏ်သတင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ဒီနေရာမှာ infographic ပါပဲ။ သင် download လုပ်နိုင်ပါတယ် Softcrylic မှ PDF.
Tags: ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု tags များလှည်းစာမျက်နှာကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာအတည်ပြုချက်ကိုစာမျက်နှာe-commerce အိမ်စာမျက်နှာe-commerce tag များအီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်မှုတံဆိပ်ကပ်ခြင်းအီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေး tags များinfographicထုတ်ကုန်စာမျက်နှာစျေးဝယ်စာမျက်နှာအချစ်စာရင်းစစ် tag ကိုtag စာရင်းစစ်tag ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစာရင်းစစ်မှတ်သားခြင်းtags များကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာမျက်နှာဝဘ်ဆိုက် tag များ